eHimalaya Online || News from nepal » आफ्नो तौल घटाउन आप्नाउनुहोस जापानी पानी थेरापी ।
आफ्नो तौल घटाउन आप्नाउनुहोस जापानी पानी थेरापी ।
२०७७ माघ १० गते शनिवार ०५:४६
आफूलाई फिट राख्न हामी के गर्दैनौं? यदि कसैको वजन अधिक छ भने, उनीहरूले यसलाई कम गर्न, जिम जाने र धेरै प्रकारका व्यायामहरू गर्न उत्तम आहार योजनाको अनुसरण गर्छन्। तर धेरैपटक यी चीजहरूले पनि काम गर्दैनन् जसले निराशा मात्र थपिन्छ । तर...
आफूलाई फिट राख्न हामी के गर्दैनौं? यदि कसैको वजन अधिक छ भने, उनीहरूले यसलाई कम गर्न, जिम जाने र धेरै प्रकारका व्यायामहरू गर्न उत्तम आहार योजनाको अनुसरण गर्छन्। तर धेरैपटक यी चीजहरूले पनि काम गर्दैनन् जसले निराशा मात्र थपिन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ पानीले तपाईंको वजन घटाउनमा मद्दत गर्दछ । हो! अचम्म नमान्नुहोस, किनभने यो संम्भव छ । कसरी ?
जापानी पानी उपचार के हो?
वास्तवमा पानीले तपाईंको वजन घटाउन मद्दत गर्दछ। यसको लागि पिउने पानीको एउटा विशेष तरीका छ जुन जापानमा प्रख्यात छ, जसलाई जापानी पानी थेरापी भनिन्छ । यस प्रसिद्ध जापानी पानी उपचारमा बिहान सबेरै उठेपछि प्रशस्त पानी पिउन सिफारिस गरिन्छ । यो बिहान धेरै विशेष मानिन्छ । यो विश्वास गरिन्छ कि यस समय पानी पिउँदा पाचन प्रणाली स्वास्थ रहन्छ र साथै तौल कम हुन्छ । यो जापानी पानी उपचारले हाम्रो आन्द्रा सफा गर्छ ।
पानीले तौल घटाउन कसरी मद्दत गर्दछ?
एक अध्ययनको अनुसार खाना खानु आघि वयस्क जसले २.१ कप पिउने गर्छन अर्थात् खाना खानु भन्दा ३० मिनेट अघि ५०० मिलि पानी पिउँदछन् तर खानु भन्दा पहिले तरल पदार्थ सेवन गर्ने वयस्कहरूको तुलनामा १३ प्रतिशत कम खाना खान्छन् । अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि पानीले चिनीले भरिएको पेय पदार्थको सट्टामा क्यालोरी सेवन घटाउन सक्छ जसले अन्यथा तौललाई बढावा दिन सक्छ ।
वैज्ञानिकहरूको विचार मिश्रित छ
यो मेडिकल प्रणाली जापानमा एकदम प्रख्यात छ र अब यसले विश्वको विभिन्न भागहरुमा धेरै लोकप्रियता लिएको छ, तर वैज्ञानिकहरूले यस बारे मिश्रित राय दिएका छन्। केहि अनुसार, यो प्रभावी छ जबकि अरूको विश्वास यो वजन घटाउन मा प्रभावी नहुन सक्छ। तिनीहरू विश्‍वास गर्दछन् कि १५ मिनेटमा आंतहरूले मस्तिष्कमा सिग्नल पठाउन सक्दैन कि यो भरिएको छ। त्यसकारण, बिस्तारै खानु र खाना राम्रोसँग चपाउनु वजन घटाउन र राम्रो स्वास्थ्यको लागि सधैं लाभकारी ठानिन्थ्यो।
एक विशेषज्ञ वा डाक्टरसँग परामर्श लिन महत्त्वपूर्ण छ
केही विज्ञहरूका अनुसार यस जापानी पानी उपचारले कम क्यालोरीको कारण सुरुमा तौल घटाउन सक्छ, तर यो टिकाउ हुने छैन । यस थेरापीको अर्को न,कारात्मक पक्ष ओभरहाइड्रेशनको जो;खिम हो । धेरै पानी पिउँदा शरीरमा सोडियमको मात्रा ख;-तरनाक स्तरमा कम हुन सक्छ । यसले मतली, बान्ता, दौरा र कोमामा समेत निम्त्याउन सक्छ । यो उपचारको प्रयास गर्नु अघि विशेषज्ञको परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ ।
नोट: यो सल्लाह तपाईलाई सामान्य जानकारी प्रदान गर्न मात्र दिइएको हो । केहि उपभोग गर्नु भन्दा पहिले वा कुनै घरेलू उपचार लिनु अघि । तपाईले आफ्नो डाक्टर वा विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति २०७७ माघ १० गते शनिवार ०५:४६